Xaashiyaha waraaqda laambarka Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
Xaashiyaha waraaqda laambarka
03.06.2013 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Iftiiminta Farshaxanka, Fikradaha Guriga, Samee naftaada
Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah figradaha waaweyn ee qurxinta nalalka. Sida loo rogo laambadaha waraaqaha caadiga ah ka dhigaya qaababka nalalka iftiimaya oo qurux badan. Suurtagalnimada ayaa ah mid aan xadidnayn, laakiin waxaan soo xushay dhowr kuwa dano kuu leh.
Fikrad aad u soo jiidasho leh waa qurxinta nalalka midabka leh oo ay ku jiraan waxyaabo warqad ah. Waxay noqon karaan qaab ubaxyo kala duwan ah (ubax, cajiin, gerberas) ama wareegyada waraaqaha oo isku mid ah, oo si adag isku dhagan. Laakiin qurxinta noocan ah waxaad u baahan doontaa tiro badan oo ubax ah oo horey loo diyaariyey. Waxaan kuu soo bandhigeynaa khiyaamo loogu talagalay kiiska - waxaad isticmaali kartaa xaashiyaha waraaqaha koob-kareem ah ee waraaqaha lagu diyaariyo oo midba midka kale midka kale ku dhegan yahay - tani waxay wax u dhimaysaa waxayna heli doontaa qaab muuqaaleed oval xiiso leh Haddii aadan rabin inaad ku dhejiso geerashka geedka oo dhan, u diyaari qaab qurux badan oo qayb ka mid ah ubax jilicsan oo u eg ubaxaynta guga.
Fikrad kale oo qurux badan oo loogu talagalay qurxinta ayaa ah farsamadii horey loo yiqiin qurxinta. Ka gooya qaabka aad kaheshay xafaayada, horay u dux barida ku dheji xabagta C200 burush jilicsan. Waxaad ku dhejisaa sheyga ka dibna si dhakhso leh ayaad u isticmaashaa lakab kale oo koollo ah iyada oo leh dhaqaaq dhaqaaqyo fudud oo gudaha ah si aad meesha uga saarto wixii hawo ka soo baxa oo aad tirtirto waxyaabaha aan fiicnayn. Marka waxaad si tartiib tartiib ah ugu dhejisaa mowduucyada kale ee loo xushay qurxintaada. Waxaad sugeysaa inay qalajiso waana taasi!
Fikrad xiisa leh ayaa ah isku-dhafka xargaha iyo ubax cherry ah oo warqad ah. Xitaa hadaadan hibo ku laheyn cilmiga farshaxanka, dhib malahan inaad sameysid laan geed midabkiisu madow yahay iyo inaad ku dhejiso ubax midab leh. Qurxin qurxan oo jilicsan oo laambadahaaga ah ayaa la helay.
Dhab ahaantii waxaa jira farsamooyin badan oo xiiso badan, laakiin halkaan waxaan kuugu soo bandhignay kuwa aan u maleyneyno inay fududahay in la qabto oo weli qurux badan oo ku filan in la soo taabto farshaxanka iyo shaqsiyada guriga gudihiisa.
abaabul, nambarka fanka, iftiinka farshaxanka, gudaha farshaxanka, qurxinta farshaxanka, décor, qurxinta, qurxinta, qurxinta nalalka, qurxinta, qurxinta nalalka, design, fikradaha, qurxinta fikradaha, fikradaha guriga, fikradaha gudaha, fikradaha iftiinka, fikradaha qurxinta, fikradaha laambadaha, gudaha, nashqadeynta gudaha, Laydhka Shiinaha, laambad, laambadaha, laambad, laambadaha, laambadaha, luminaire, nalka, chandeliers, chandelier, laambad rinjiyeeyay, qurxinta, qurxinta nalalka, laambad, laambad leh laamo, laambad leh ubax, laambadaha, warqad laambad, nalalka waraaqaha, ubax, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Dhowr fikradood oo loogu talagalay ukunta Easter qurux badan
Farsamooyin kala duwan oo midabaynta iyo qurxinta ukunta Easter. Haddii aad haysato daruuriga ...
Quillinta - Abuuritaanka qaab waraaqo oo gaar ah
Quful, quful ama warqad waraaqo ah waa nooc farshaxanimo ah oo uu abuuray ...
Qurxinta beerta asalka ah
Fikradda qurxinta beerta oo leh sanduuqyo iyo ubaxa. Fikradaha xiisaha leh iyo kuwa aan caadiga ahayn ...
Guryo qurux badan
Fikradaha guriga iyo beerta. Mar labaad fikrad xiiso leh oo ku saabsan qurxinta guriga iyo naqshadeynta. Qurux ...
Choreg (չորեկ) waa Armenian weasel oo ku lug leh ciidaha Ciidda Masiixiga sidoo kale ...
Naftaada ka dhig mid tabo beero ah taayirrada duugga ah
Cid kastaa waxay samayn kartaa qashin jibbaar oo ka samaysan taayir gawaarida duugga ah, haddii ...
Gudaha oo isku habboon
Markii aan soo galnay aqalkan qaaliga ah, waxaan si toos ah u helnaa nafteena meel ballaadhan oo ...
Naqshadeynta Gudaha - Fikradaha Qolka Quruxda Badan
Fikradahan qolka fadhiga ee quruxda badan ayaa tusaale weyn u ah sida ay uga duwan yihiin kuwa ...